Amaphupho ngokubukeka kwezwe, izitshalo nezihlahla – iAfrika
Amaphupho ngokubukeka kwezwe, izitshalo nezihlahla
Asho ukuthini amaphupho amayelana nokubukeka kwezwe, izitshalo kanye nezihlahla? Lokhu kuhlanganisa amajikijolo, insangu, amakhowe, imbabazane, umhlanga, imigede, izingwadule, amagquma, ukuzamazama komhlaba, amachibi, imifula kanye nezintaba.
Ukuphuha isihlahla noma izihhlahla (ihlathi) kungasho izinto eziningi. Uma isihlahla…
Uma uphupha ubona isihlahla samajikijolo kusho ukuthi izingane zakho ziyophumelela…
Uma uphupha ubona isitshalo sensangu kusho ukuthi udinga ukuthatha isikhathi…
Uma uphupha ubona umhlonhlo kusho ukuthi uyoba nenhlanhla ikakhulukazi ebudlelwaneni…
Uma uphupha ubona izimbali kusho injabulo ekusaseni lakho ngaphandle uma…
Uma uphupha ubona ihlathi elincane eduze kwendlu yakho kusho ukuthi…
Uma uphupha ubona utshani kusho ukuthi uyothola injabulo kanye nempumelelo…
Uma uphupha ubona amaqabunga kusho izinto ezinhle uma eluhlaza futhi…
Uma uphupha ubona amakhowe kuyinhlanhla ukuwakha kodwa kuyishwa ukuwadla –…
Uma uphupha ubona izitshalo zembabazane kuyinhlanhla ikakhulukazi uma zikuncinza. Kusho…
Uma uphupha ubona izitshalo incazelo iya ngokuthi zikhula kanjani. Uma…
Uma uphupha ubona umhlanga kusho ukuthi othile uyakukhohlisa.
Uma uphupha ubona izimpande zesihlahla kusho ukuthi kuyoba neshwa ekusaseni…
Uma uphupha ubona ukhula uyolahlekelwa izinto ezisemqoka kuwe.
Amaphupho ngomnqumo wasendle
Uma uphupha ubona isihlahla somnqumo wasendle futhi sinezithelo emagatsheni kusho…
Uma uphupha usemgedeni noma emhhumeni kusho ukuthi kunokungaqiniseki empilweni yakho….
Uma uphupha usogwadule kusho ukuthi kuneshwa ekusaseni lakho.
Amaphupho ngokuzamazama komhlaba
Uma uphupha uzwa ukuzamazama komhlaba kusho ukuthi uyolahlekelwa izinto ezisemqoka…
Uma uphupha usegqumeni eliwumqansa futhi elinzima ukulikhwela kusho ukuthi uyozabalaza…
Uma uphupha usechibini kusho ukuthi kungekudala uzobona othile obumcabanga.
Uma uphupha usentabeni ngokujwayelekile yishwa. Uma uyibona ekudeni kusho ukuthi…
Uma uphupha usodakeni kusho izinto ezimbi. Uma lukungcolisa abantu bakhuluma…
Uma uphupha useduze nomfula kusho inhlanhla kanye nokuchuma uma amanzi…
Uma uphupha usesihlabathini kusho ishwa. Uzolwa nothile omaziyo noma ubenamahloni…
Uma uphupha usobhukwini kuyishwa ngaphandle uma ungumlimi. Kwabanye abantu kusho…
Uma uphupha usehlane kusho ukuthi izifiso zakho ziyofezeka.
Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa…
Uma uphupha usonqenqemeni lwesiwa kusho ukuthi kukhona okusemqoka okuzokwenzeka ebudlelelwaneni…
Ukuphupha ngamanzi kumele okubi noma ukungaqiniseki okuzwayo. Isimo esingalindelekile. Amanzi angakhombisa futhi imizwa emibi njengokwesaba noma izinhloso ezimbi. Imicabango emibi enganakekile nemizwa emibi. Izimo ezinzima eziletha ukungaqiniseki, okungajwayelekile, izithiyo, noma izinguquko ezingathandeki.
Okuhle ukuthi amanzi angamela ukuqala kabusha noma ukuba musha njengokugeza, ukuphuza amanzi, noma amanzi asebhodleleni.
Ukuphupha ngamanzi acwebile kumela ukuthula engqondweni. Ubhekane nenkinga noma isimo semizwa esinzima. Kungenzeka uzizwe ukhululekile ubona inkinga sonke isikhathi.
Ukuphupha ngamanzi angcolile kumela izimo ezimbi noma kugaqiniseki okufanele kucatshangelwe sonke isikhathi noma okwenza kube nesidingo sokuthi uhlale uqaphile. Ukuphuza amanzi angcolile kungakhombisa indlela yokuqala kabusha esengcupheni noma eyonakele. Ukuba nomuzwa wokuthi uphucwe ithuba lokwenza kangcono.
Ukuphupha ngokuba phansi kwamanzi kumela izimo zasempilweni lapho ophapheme khona lapho ozizwa ungakwazi ukumela imizwa emibi noma izinkinga. Kungezeka ukuthi wehlulwa yisimo futhi uzizwa wehlulwa imizwa yakho.
Ukuphupha ukuthi ukwazi ukuphefumula ngaphansi kwamanzi kusho imizwa ngokukwazi kwakho ukuziphatha kahle ezimweni lapho okungenasiqiniseko kuzo noma lapho okunobubi khona. Ushintsha ukuze ubhekane nezinkinga ezinzima noma ukumelana ngokuzibophezela nesimo esibi kunazo zonke empilweni yakho.
Ukuphupha insimu yokulima izitshalo kusho ulaka lwabaphansi, lolulaka lungachaza ukunganeliseki…
Tags Izihlahla, Izitshalo, Ukubukeka kwezwe